स्थानीय निर्वाचनको व्यग्रता
नेपालको मौजुदा संविधानको धारा २९६ (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका – संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ भनी उल्लेख भए बमोजिम संविधानमा देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दति अनुरूप सञ्चालन गर्न तोकिएको मिति अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । यही अनुरूप ९ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अगामी वैशाख ३१, २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको छ ।
व्यवस्थापिका – संसद्मा लामो समयसम्म संविधान संशोधनको विषयले टुङ्गो पाउन सकेन । तर निर्वाचनको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अन्य कतिपय संवैधानिक सङ्कट समेत उत्पन्न हुन सक्ने बोध गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि सँगै अगाडि बढाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ । फागुन ११, २०७३ मा सर्वाेच्च अदालतले पनि ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाध्यकारी निर्णय सुनाएको थियो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा गाउँपालिका ४६२, नगरपालिका २४१, उपमहानगरपालिका १२ र महानगरपालिका ४ गरी जम्मा ७१९ स्थानीय तह रहने व्यवस्था सुझाइएको थियो । तर मधेशी मोर्चाले यस विषयमा समेत विमति जनाउँदै जनसङ्ख्याको आधारमा यो सङ्ख्या बढाउनु पर्ने दलिल राख्यो । यस अनुरूप हालै नेपाल सरकारले तराईमा ... र पहाडमा ...गरी २१ नयाँ स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरी ७४४ स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेको छ । योसँगै अरू सङ्ख्या थप गर्न सकिने बाटो पनि खुलै राखेको भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरिसकेपछि स्थानीय तह थप गरिएकोबारे अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतबाट आवश्यक निर्णय हुने नै छ ।
नेपालमा पछिल्लो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन वि.सं. २०५४ मा सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ मा पूरा भएको हो । यस अर्थमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति विगत चौध वर्षदेखि रिक्त छ । यस रिक्तताले स्थानीय तहका जनता रानु हराएका माहुरीतुल्य हुन पुगेका छन् । सरकारले यो रिक्तता पूर्ति गर्न कहिले सर्वदलीय समितिको व्यवस्था ग¥यो भने कहिले कर्मचारीको जिम्मा लगायो । हाल आएर सरकारले उन्नाइस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा सर्वसाधारण ज्यादै उद्वेलित छन् । उनीहरू आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न व्यग्र देखिन्छन् । आम नागरिकले यस निर्वाचनबाट विभिन्न सकारात्मक परिणाम निस्कने अपेक्षा राखेका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसपछि सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अब गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी करिब ६ हजार ६९७ वडा रहने छन् । प्रत्येक वडामा चार÷चार जना सदस्य निर्वाचित हुने, प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुने र वडा समितिमा दुई महिलामध्ये एक जना दलित महिला रहने व्यवस्थाले आगामी स्थानीय तह पूर्ण रूपले समावेशी हुने निश्चित छ । यस सिलसिलामा सबभन्दा बढी महिला (४० प्रतिशत) लाभान्वित हुनेछन् । स्थानीय तहको व्यवस्था सङ्घीयताको तल्लो संरचना भएकाले देशभरका विभिन्न जनजातिले जराधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने अन्यले आफूलाई सशक्तिकरणतर्फ उन्मुख गराउनेछन् ।
समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत निजामती सेवामा विगतका नौ वर्षमा (आ.व. २०६४÷६५–२०७२÷७३) जम्मा ८,आठ हजार ५३० कर्मचारी लाभान्वित भएको पाइन्छ । यसको तुलनामा स्थानीय तहको एउटै चुनावमा त्योभन्दा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यो पक्कै पनि सुखद अवसर हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् प्रत्येक निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कार्य आफैँ सञ्चालन गर्नेछन् । यसले यथार्थमा तलबाट सिर्जित योजनाको (बटम अफ प्लानिङ) सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्नेछ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र अनुगमनको कार्यमा स्थानीय नेतृत्व जिम्मेवार बनाइने छ । स्थानीयबासीको चाहना अनुरूप निर्माण गरिएका योजनामा उनीहरूको सहभागिता पनि ह्वात्तै बढेर जाने छ । फलतः निर्वाचन सम्पन्न भएको एक दुई वर्षभित्रै स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरूले तिव्रता पाउने छन् । देशमा विकासले नयाँ अङ्कुर हाल्नेछ ।
संविधानसभाको धारा ५७ (१) र धारा १०९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार निर्देश गरिएका छन् । जसअनुसार स्थानीय तहको अधिकार २२ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची १५ निर्धारण गरिएका छन् । यसका साथै मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले तयार गरेको अधिकार र सूचीको विस्तृतीकरणमा स्थानीय तहको अधिकार सङ्ख्या ३७ तोकिएका छन् । यी सब अधिकार सूचीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बढी जिम्मेवारी र जवाफदेही समेत तुल्याएको छ । आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । यस कार्यमा असक्षम देखिने जनप्रतिनिधिहरू क्रमशः आउँदो निर्वाचनमा बढारिँदै जानेछन् । यस अर्थमा आगामी चुनावमा निर्वाचित हुने प्रत्येक जनप्रतिनिधिले यसलाई चुनौती र अवसरका रूपमा स्वीकार्नु जरुरी छ ।
विगतमा स्थानीय तहमा गठन भए गरिएका सर्वदलीय समितिले विकास निर्माणको अत्यधिक रकम दुरूपयोग गरेको लाञ्छना लागिरह्यो । विकास गर्नेभन्दा सहमतिमा राजस्व रकम बाँडीचुँडी खाने प्रचलनका कारण यस्ता समितिहरू आलोचनाका पात्र बन्न पुगे । जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले विगतको परम्परामा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्ने र खर्च भएको प्रत्येक रुपियाँको फेहरिस्त पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हो भने रकम हिनामिनाको सम्भावना स्वतः कम भएर जान्छ । केन्द्रबाट प्राप्त रकम दुरूपयोग गर्न जति आँटिलो भइन्छ, आफैँले उठाएको राजस्व र अन्य आम्दानीमा सो सम्भव रहन्न । स्थानीय तहमा भए गरिएका प्रत्येक खर्चको खबरदारी जनताबाट हुन्छ नै । महिलाहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वले भ्रष्टाचार न्यून हुने व्यहोरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।
स्थानीय तह आम नागरिकको सबभन्दा नजिकको संस्था हो । यस्ता संस्थासित उनीहरूको घनिष्ट सम्बन्ध रहन्छ नै । अतः बदलिँदो परिवेशमा जनताले प्राप्त गर्ने आवश्यक सेवा सुविधाका लागि यही संस्थामा सम्पर्क राख्नेछन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तल्लो निकायमा रहेका संस्थाहरू सुदृढ गर्दै उनीहरूलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । यस अनुरूप यी संस्थाहरू आम नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सबल हुँदै जान्छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दा नयाँ नेपालको विकास प्रतिस्पर्धी भावना अनुरूप सञ्चालन गरिनेछ । यस अर्थमा विकास निर्माणका कार्यहरू अन्तर स्थानीय निकायमा मात्र नभई अन्तर प्रदेशमा समेत हुनेछन् । यसले विभिन्न प्रदेश एवं स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिबीच विकास निर्माणको कार्यमा प्रतिस्पर्धाको भावना सिर्जना हुनेछ । संस्था–संस्थाबीचको प्रतिस्पर्धाले जनता लाभान्वित हुनेछन् । आर्थिक दृष्टिले आफू सबल नहुञ्जेलसम्म, राम्रो प्रतिफल÷परिणाम देखाउन सक्ने निकायले सङ्घ र प्रदेशबाट थप सहयोग प्राप्त गर्नेछन् भने सो क्षमता देखाउन नसक्ने टाढिंदै जानेछन् ।
नेतृत्व उत्पादन गर्ने अवसर
राजनीतिज्ञहरूका लागि स्थानीय तहका संस्थाहरू आफू प्रशिक्षित हुने थलो समेत हुन् । हाल तल्लो तहमा खरो साबित हुने जनप्रतिनिधिहरूले भविष्यमा माथिल्लो तहमा समेत दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । विभिन्न तहको कसीमा प्रमाणित गर्दै माथि उठ्ने नेताबाट नै राष्ट्रले राजनेता प्राप्त गर्न सक्दछ । विगत १९ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नभएकै कारण पनि नेपालको राजनीतिमा कुशल नेतृत्वको खडेरी देखापरेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन ।
यी बुँदाका साथै स्थानीय तहको निर्वाचनले सिर्जना गर्ने सुखद पक्ष अनन्त छन् । अतः यो वा त्यो बहानामा घोषित निर्वाचन बिथोल्ने, पर सार्ने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन । लामो समय पश्चात् सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको सफलतासँगै देशमा सङ्घीयताको भविष्य समेत जोडिएकाले यसलाई आम नागरिकले व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरेको बुझ्न सकिन्छ ।